Budata Eurocopter EC120B Colibri v1.3 X-Plane 10 - Rikoooo
Eurocopter EC120B Colibri 'P-ROP5' v1.3 Akụrụngwa Pụrụ Iche.
Eurocopter EC120 Colibri (Bekee: hummingbird) bụ 5-oche, otu injin, otu isi rotor, helikopta ọkụ. Jocopter, China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), Harbin Aviation Industries (Group) Ltd (HAI) na Singapore Technologies Aerospace Ltd (STAero) nọ na Eurocopter France Marignane eweta, EC120 B na-achịkọta ya. Eurocopter na France na Australia. Na China, ụgbọ elu nke Harbin na-emepụta dị ka HC120. Binlọ ọrụ na-emepụta Harbin Aircraft (HAMC) malitere arụpụta HC-120 na 2004, akara ọgbakọ dị na mpaghara ugwu China a bụ naanị eriri HC-120 na mpụga France. Ndị agha China PLA na ndị uwe ojii mpaghara zụrụ Hlic-120 helikopta.
Eurocopter nwere mmasị 61% na oru ngo ahụ, yana CATIC nwere 24% na STAero nwere òkè 15%. (Widipedia)
Ọ na-emeghe atụmatụ ya:
- Ihe omumu ihe omumu ihe omuma nke 3D ohuru zuru oke na njikwa ụgbọ elu na pilot zuru oke.
- Groovy 3-D Isi Ngosipụta / Ngosipụta ala, jiri maapụ na-agagharị na igwefoto vidiyo na-eji ụgbọ elu.
- Ngosipụta mmapụta GPS iji mee ka arụmọrụ nke obere bọtịnụ dị na gburugburu ebe anwụrụ ọkụ 3D
- Dị ka ezigbo ịme anwansị nke Eurocopter VEMD (Ugbo ala na Ngosiputa Ngosiputa otutu) X-Plane ikike.
- 3D kwekọrọ na nke na-ahụ ụzọ: iwu ‘transpanel’ na-eme ka ozuzo ọkpacha ahụ dum.
- forwardlọ elu igwe kwụ ọtọ na-aga n'ihu iji bulie elu na-ahụ ọhụụ.
- Ejiri ederede LIT zuru oke na-enye ezigbo mgbanaka dị ala mana enwere ike ịgbatị abalị.
- Ọrụ eserese ọhụụ Ego-Genius nke akpọghị akpọ - na-eji oji ma ewezuga fenestron flow-edo edo edo….
- Nnukwu nziputa enyo enyo si n’ime ya puta.
- Ego dị mma karịa nke ndabara mere X-Plane 747
- Ọ efe efe nke ọma .....
Onye edemede: Beat B, Propsman